गूड न्युज ! नेपाली मास्टर बेकर सन्जिव गिरीले जिते डेनमार्कमा एक लाख क्रोनर «
गूड न्युज ! नेपाली मास्टर बेकर सन्जिव गिरीले जिते डेनमार्कमा एक लाख क्रोनर
प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०७७, शनिबार २०:४०
काठमाडौं । डेनमार्कमा एक जना नेपाली युवाले एकलाख डेनिस क्रोनर अर्थात् १९ लाख नेपाली रुपैयाँ छात्रवृति पुरस्कार पाएका छन्। प्रत्येक वर्ष डेनमार्कको प्रख्यात एक संस्था एपी मुलर फाउन्डेन्सले प्रशिक्षर्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति यस वर्ष नेपाली युवा सन्जिव गिरीले जितेका हुन्। माग भएको छात्रवृतिमा आवेदन दिँदै सहभागी गिरीले एकलाख डेनिस क्रोनर अर्थात् १९ लाख नेपाली रुपैयाँ पाए।
यस वर्षलाई संस्थाले दुई विधामा सर्वोकृष्ट हुनेलाई पुरस्कृत गरेको थियो। बेकरी विधामा गिरीले पाए। अर्को बिधामा भने होम पेन्टिङमा उत्कृष्ट हुनेलाई दिइयो।
सन्जिवले अन्तिम परीक्षामा उत्कृठ अंक प्राप्त गदै रजत पदक पाए । यो पुरस्कार पाउने डेनमार्कमा कार्यरत नेपालीमध्ये गिरी पहिलो व्यक्ति हुन्।
उनले पाएको छात्रवृत्तिको रकमले युरोपकै फ्रान्समा गएर थप अध्ययन गर्ने बताएका छन्। फ्रान्स बेकरीमा विश्वप्रख्यात छ।
सावर डो ब्रेडको बारेमा एवं अर्टिसियन बेकिङको तालिम लिने र त्यहाँबाट सिकेको सीप डेनमार्क तथा स्वदेशमै उपयोग गर्ने र चाँडै नै नेपालमा बेकरी स्कुल सञ्चालन गर्ने उनले बताए।
गिरीले भने ‘मैले यो पुरस्कार पाउँछु भनेको सोचेको पनि थिइन म काम गर्ने कम्पनीले यस्तो छात्रवृतिको जानकारी दियो र म पढिरहेको जेड बीसी स्कुलले मलाई सिफारिस गरेर सहभागी भए र मैले पुरस्कार जित्छु नै जस्तो लागेको थिइन्। छात्रवृत्ति पाउँदा आफू धेरै नै खुसी भए।
२०४२ सालमा काठमाडौंको नागार्जुन नरपालिका रामकोटमा जन्मिएका गिरीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानविकी संकायबाट स्नातक गरेका थिए।
जेड.बी.सी रिङ्गस्टेडमा अध्ययन गर्दै टिवोलीको निम्ब र एन्डरसन बेकरीमा काम गर्दै २०१९ मा बेकरीमा स्नातक गरेका छन्। गिरीले ११ वर्ष अघि होटल सोल्टी, सोल्टी होटल अन्तरगतै एलएसजी स्काई सेफ तथा होटल द्वारीकाजमा काम गरेका थिए।
हाल डेनमार्कको राजधानी कोपन हेगन एन्डरसन बेकरीमा २०१० देखि मास्टर बेकरको रुपमा काम गरिरहेका छन्।
डेनमार्कमा नेपाली बेकरहरुको संख्या नगन्य मात्रै रहेको छ। एन्डरसन बेकरी जापानमा सन् १९५९ मा स्थापना भएको हो । २००८ मा यो कम्पनी डेनमार्कमा स्थापना भएको हो।
यो बेकरी हाल विश्वभर फैलिएको छ भने डेनमार्कको टप टेन बेकरीको रुपमा परीचित छ। कोरोनाका कारण यस वर्ष डेनर्माकी महारानीबाट पाउने रजत पदक भने अर्को वर्षको मार्चमा प्रदान गरिने छ। पुरस्कार रकम र प्रमाण प्रदान गरिसकेको छ।
गिरी बेकरी सम्बन्धी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सन् २०१० मा डेनमार्क पुगेका थिए।
विश्वका यी १० देश, जहाँ शिक्षकले पाउँछन् सबैभन्दा बढी तलब
भनिन्छ कि शिक्षण केवल एउटा यस्तो पेसा हो। जसले बाँकी सबै पेसाहरुलाई जन्म दिन्छ। तर,
एमसिसी नेपालको हितमा छ, अमेरिका ‘करेक्सन’ गर्न तयार छ – प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी नेपालको हितमा रहेको बताएका छन्। एमसिसीमा ‘करेक्सन’ गर्न अमेरिका तयार छु
२०२४ देखि उड्ने ट्याक्सी सञ्चालन गरिने
‘उड्ने ट्याक्सी’ धेरै लामो समयदेखि फिल्म र एनिमेसनमा सुनिँदै आएको विषय हो । र २१